Shina: Google lasa fanalàn’ny mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Shina: Google lasa fanalàn'ny mpiserasera
Voadika ny 23 Febroary 2010 20:41 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, বাংলা, македонски, English
Araka ny fitantaran'nyNew York Times vao haingana ilay nolazaina ho ‘Operation Aurora’, izay namely ny Google sy ireo vondronorinasa tandrefana 33 farafahakeliny dia noheverina ho niainga avy tamina Anjerimanontolo Shinoa. Ny iray amin'ireo ‘Anjerimanontolo’ ireo raha ny tena marina dia sekoly fampianarana asa mampalahelo kely sokajy fahaefatra any avaratr'i Shina. Ny anaran'izany sekoly izany moa dia Kolejy Mandroso fampianarana asa eto Shandong Lan Xiang, izay manofana teknisiana manamboatra fiarakodia aloha hatreto.
Ny tena nahatalanjona ny tontolon-tserasera Shinoa dia tsy any amin'ilay hoe nohamarin'ny lahatsoratra ny fiampangan'ny Google loatra fa dia hoe na dia sekoly (tsy dia manao ahoana loatra) tahaka ny any Lan Xiang ve no hahavita fanafihana arifomba tahaka ireny. Manombana ny maro fa nibitaka mihitsy izay ny mpitantana any Lan Xiang rehefa ny sekoly no nakarin'ny dokambarotra avy amin'ny (gazety) kalaza manerantany tsy nandoavana ariary tahaka ireny. Ireto manaraka ireto ny sasantsasany tamin'ny hevitra notsongaina tao amin'ny QQ.com
Hitady asa? Mianara any Lan Xiang!
Izany hoe tena voan'ny mpianatra any Lan Xiang izany ny ela nihetezan'ny solosaina Amerikana?
Dia tena asam-barotra ho an'ny Lan Xiang izy ity!
Tsy mety ve ry (New York Times) raha mba tahaka ny hoe mpianatra amin'ny Anjerimanontolon'i Tsinghua na Beijing no nanao azy? Lan Xiang hoe?! Tokony ho menatra ny tenanareo mihitsy ianareo Amerikana. Sekoly teknika tsy dia mankaiza loatra ve no mahatafika milin-karoka malaza sy goavana manerantany araka izay itiavany azy? Tena henjana tokoa angamba i Shina!
Tonga mandokandoka ao amin'ny Takelam-pitantanana ny tanànan'i ao amin'ny Baidu.com ny avy amin'ny lafivalo. Fahita mahazatra ho fiarahabana ny hoe “Miarahaba anareo any Lan Xiang ny solontenan'ny mpianatra Shinoa avy eto amin'ny Anjerimanontolon'i Kyoto” sy ny hoe “Mandefa ny fiarahabana (ho anareo) ny Anjerimanontolon'i Nanjing momba ny Aeronôtika sy ny Asthronôtika”.
Nanjary nahavitana sora-panesoesoana tsara petrapetraka ihany koa ny tantara:
望而却步的美国人，借攻击谷歌事件污蔑我国第一名校，企图降低我校在国际上的地位。蓝翔技校发言人对此表示，虽说该校学生 已经具备攻克美国政+府网站的能力，但该校管理严格，学生素质甚高，更重要的是，学生正在攻克艰深的科学研究，不会浪费时间攻击一个普通的互联网搜索网 站。
Nampiasa ny Google ny Amerika feno fanaintainana hanalana baraka ny sekoly mamirapiratra indrindra eto amin'ny firenentsika, ary mieritreritra ny handrava ny toerana saro-takarina ananan'i Lan Xiang eo anivon'ny fiarahamonina iraisam-pirenena saingy ho sasa-poana. Milaza moa ny mpitondra tenin'i Lan Xiang fa na dia mananany fahaizana ho enti-mandrava ny vohikalan'ny fitondrana any Etazonia aza ny mpianatra any Lan Xiang, ny fitsipi-pifehezana henjana dia henjana sy ny fahamendrehan-toetra ananan'ny mpianatra dia manome antoka mazava tsara fa tsy hisy velively ny fanafihana tahaka ireny. Ary ny tena zava-dehibe dia mbola sahirana manao fikarohana siantifika manandanja ny mpianatray ka tsy handany fotoana amin'izay milin-karoka tsotsotra tahaka ireny.
Na eo aza ireo fanesoesoana rehetra ireo, dia hahavita zavatra tahaka izany tokoa ve ny ao Lan Xiang? Ny fijerena ny zavamisy voasoratra talohan'ny lahatsoratry ny New York Times ao amin'ilay vohikalan'ny tanàna ihany dia ahatarafana fa sekoly ‘fozaorana’ (ordinaire) ny any Lan Xiang!
Eo amin'ny lafiny fampianarana, be dia be ny fampianarana teorika ao fa ankavitsiana kosa ny pratika. Efa korontan'entana fotsiny ny ankamaroan'ny fitaovana ao, fa raha misy ny fitaovana tsara dia atao fampirantiana izay. Raha eo amin'ny fanorotoroana sy ny saram-pianarana kosa indray, tsy maintsy aloa mialoha ny sara. Tsy izay ihany, fa teren'ny sekoly koa ianao hividy izay tsy takany amin'ny fomba hafa. Tsy mety tapitra ny karazam-bola aloa ao nefa tsy misy tapakilam-pandoavana mihitsy ho setriny! Eo amin'ny lafiny sakafo indray, tena loza izany cafeteria ao izany. Sarotra dia sarotra ny mahita sakafo tena tianao hohanina ao izany. Vitaina ao anatina lapoalin-tsinoa lehibe avokoa ny sakafo rehetra ao ka mbola ratsy noho ny any Am-ponja!
Tany no nahazoako diplaoma. Tsy hitako loatra izay holazaina ny amin'io sekoly io. Mpisoloky daholo ny (mpitantana) ao.
Misy ve ny porofo mazava ahafahana miampanga ny any Lan Xiang? Ankoatra izany, hisy fiantraikany amin'ny toe-tsaina nasionalista niakatra tampoka tany Shina ve izany porofo izany? Tsy maintsy miandry isika ijerena izay fiafaran'ny tantara.
Tantaran'ny Shina farany
Azia Atsimo 4 andro izay
Nohamafisin'ny governemanta amerikana ny fanaovana ankivy ara-diplaomatika ny Lalao Olaimpika Ririnina 2022 any Beijing
Amerika Avaratra 3 herinandro izay
Soratra miverina: Wikileaks on China and Google – NYT | Abalinx
[…] Shina: Google lasa fanalàn’ny mpiserasera […]
05 Desambra 2010, 09:14